Maanta codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay ChromeCast, LocalCast | Androidsis
Barnaamijyada ugu fiican Chromecast: LocalCast Maanta
Francisco Ruiz | | Codsiyada Android, Qalabka kale
Maanta waxaan rabaa inaan daah furo qaybtaan cusub ee Androidsiswacid barnaamijyada ugu fiican ee loogu talagalay ChromeCast, taas oo ah, qaab gacan qabasho ah, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa codsiyada muhiimka ah ee aadan u waayi doonin barnaamijkaaga ChromeCast, codsiyada sida kuwa aan maanta doonayo inaan soo bandhigo oo fursad noo siin doona inaan aragno deegaanka fiidiyowyada Androids-ka si toos ah TV-gaaga oo leh ChromeCast.
Codsiga waxaa toos loogala soo bixi karaa Dukaanka Google Play, ayaa lagu magacaabaa LocalCast, iyo si aan caadi ahayn oo ku filan waxaan ugu heli karnaa qaab gabi ahaanba waa bilaash oo leh xayeysiin isku dhafan oo ku jira arjiga.
Waxaan rabaa inaan xoojiyo in-app xayeysiinta, maadaama ay ku jirto kaliya dalabka laftiisa iyo nagama qasayso telefishankayaga mana ku tarmo filimada ama fiidiyowyada aan ugu jecel nahay.
1 Maxay noo fidisaa LocalCast?
2 Sidee ayuu u shaqeeyaa LocalCast?
Maxay noo fidisaa LocalCast?
LocalCast, laga yaabee inay tahay ciyaaryahanka ugu fiican ee fiidiyoowga ah waxa aan ku heli karno waxayaga Chromecast, Ciyaaryahan leh qaab muuqaal garaaf leh oo na siinaya waxqabad buuxa, oo aan xadidneyn, oo kaliya ku darista xayeysiinta marmar ah ee markasta nagala soo gaari doonta shaashadeena moobiilka iyada oo aan la carqaladeynin taranka fiidiyow kasta ama u diro telefishankayaga.
Aniga qudhayda, oo ah adeegsade aaladdan Google, waxaan kugula talinayaa codsigan xasaasiga ah oo shaki la’aan ah mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay ChromeCast iyo in laguma waayi karo qalab kasta oo qiimihiisu cusb yahay.
Sidee ayuu u shaqeeyaa LocalCast?
LoscalCast waa sidaas fududahay in la isticmaalo sida baare fayl kasta oo loogu talagalay Android, waana inay isdhexgalkeedu u eg yahay sahaminta galka. Muuqaal nadiif ah oo nadiif ah kaas oo markii aan dooranay waxyaabaha la ciyaarayo, waxaan kaliya u baahan doonnaa inaan taabanno astaanta dul saaran ee loo yaqaan 'ChromeCast' oo ku taal dhinaca midig ee hoose si aan ula xirirno qalabka oo aan u bilowno daawashada taxanaha iyo filimada aan ugu jecel nahay.
Sidoo kale LocalCast waan abuuri karnaa Liisaska ama arag dhammaan waxyaabaha ku jira galka adigoon taaban xakamaynta ka socota Android-keena si aad ugu gudubto fiidiyaha xiga.
Marka waad ogtahay, hadaad rabto ka daawo dhammaan fiidiyowyada ku jira qalabkaaga Android, si toos ah TV-gaaga adoo maraya Chromecast, ma joojin kartid soo dejinta LocalCast maadaama ay macquul tahay inay tahay dalabka ugu fiican ee aan ku heli karno hawshan
LocalCast ee TV -ga
Developer: Stefan ayaa balan qaaday
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Barnaamijyada ugu fiican Chromecast: LocalCast Maanta
App aad u wanaagsan. Marka lagu daro waxyaabaha maxalliga ah, waxay sidoo kale na siineysaa suurtagalnimada inaan si wadajir ah ula shaqeyno codsi kale oo maareynaya iskuxirka qadka internetka. Tusaale ahaan Qpongo ☺
Ku jawaab Jerome
Si hagaagsan ugama shaqeynayso. Fiidiyowyo badan oo leh ikhtiyaarka muraayadda ayaa u muuqda kuwo wanaagsan, oo leh 'localcast' waxay siinaysaa qalad codec. Intaas waxaa sii dheer, waxay haysaa wax badan oo ka socda fiidiyow ilaa mid kale, waxay sii joogi doontaa muujinta fiidiyoow aan ahayn ... barnaamij aad u cagaar ah oo ka sarreeya kan u dhashay Chromecast laftiisa. Aniga ahaan, iguma talin.
Ku jawaab Lukesky
qaab video ah, waxaan isku dayay avi iyo mpeg2 lamana arki karo, waa la maqli karaa oo kaliya.
Yandex.Kit, oo beddel u ah Adeegyada Google Play
Barnaamijyada lagu cuno oo faraha lagu leefleeco: Maanta, Thermomix